Amathrendi abalulekile ekugembuleni okuku-inthanethi kwe-2019 nangaphezulu - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Amathrendi angukhiye Ekugembula ku-Intanethi ye-2019 ne-Beyond
Posted on Mashi 20, 2019 Mashi 20, 2019 Umbhali Andrew	Amazwana Off Kumathrekhi Akhiye Kokugembula Okuku-Inthanethi kwe-2019 nangaphezulu
Ubuchwepheshe bukhula ngokushesha futhi uma kuziwa ekugembula futhi casino online, indaba ihle kakhulu. Imbonini yokudlala e-intanethi ibone ukunyuka okungafani eminyakeni embalwa edlule, konke ngenxa yokutholakala kokugembula komphakathi kanye nokugembula izinhlelo zokusebenza. Ngaphezu kwalokho, i-casino e-intanethi ixhomeke kuphela kwezobuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa kwamuva okuye kwabahlinzeki abavumelekile ukuba bathuthukise kakhulu isipiliyoni samakhasimende. Ngenxa yalokhu, uye wakhanga umhlambi wamakhasimende amasha futhi abuyela, ngaleyo ndlela ebavumela ukuba badlale imidlalo ekhangayo ngokushelela kungakhathaliseki indawo yabo yangempela.
Hlola lezi zindlela ze-Casino eziku-intanethi ezishintsha indlela abantu ababuka ngayo amakhasino.
Ukubukeka Okungokoqobo futhi okungathandeki
Ungase ungazi ukuthi ukugembula kwikhompyutha kuvela phakathi kwe-1994-1996 ekuqaleni kwesikhathi se-intanethi. Njengoba inethiwekhi yayisencane ngaleso sikhathi, abanye abantu kuphela abasebenzisa lolu hlobo lokugembula. Yize, amakhompikhi amakhulu okungaxhunyiwe ku-intanethi ayengawubheki njengomncintiswano. Ngisho nanamuhla, i-casino e-inthanethi ayithinti ukugembula okungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Noma kunjalo, iqiniso langempela lingaphula ngempela i-status quo. Ngisho noma ubuchwepheshe buyaqhubeka futhi ngeke bubhekwe njengomsebenzi jikelele. Kukholelwa ukuthi ngokushesha i-VR isakazeka ngamakhasino amakhulu e-intanethi. Ngaphezu kwalokho, kungakha ingxenye entsha ngokuphelele embonini ye-casino e-intanethi kanye nobuchwepheshe be-AR.
Ama-casino amakhulu e-intanethi adale izinhlangano zokuhlola ezingenzi inzuzo ukufakazela ukufaneleka kwazo. Ngokusungulwa kwe-blockchain ngaphakathi kwekhasino, isakhiwo senza kube ngokuphelele ukungathembeki, ngaleyo ndlela sinikeze umhlinzeki ubulungisa. Ngaphezu kwalokho, abadlali bangahlola futhi i-generator algorithm engahleliwe nayo yonke imisebenzi. Yingakho amakhemikhali e-inthanethi engasayidingi ukuhlolwa kwamabhuku.
Kunezinkampani eziningana ezazibandakanya izinqubo ezintsha embonini njengomsikeli we-bankroll. Le ndima izokwenza ukuthi kube lula abashayeli be-casino ukuba bangene emakethe. Lokhu kuzoholela ekuthuthukiseni yonke imbonini eyenziwe ngamakhasino amancane.
I-eSports ukubheja yiyona yakamuva embonini ngaphambi kokuthi akekho owaziyo mayelana nayo. Kodwa-ke, izinto zashintsha ku-2011, lapho umqhudelwano wokuqala wamazwe wezigidi wesikhwama somklomelo wabanjwa.
Namuhla, kunezindawo eziningana ze-eSports zokubheja futhi imboni ikhula futhi iphumelele futhi. Kumele kuqashelwe ukuthi kunezingcingo ezinkulu ze-3 ezifanele ukubheja. Ngokushesha kuyoba nemidlalo eminingi futhi kuyoba nokukhula okusheshayo kule ndawo.
Ngokwenhlolovo, isakhamuzi sase-US esiphezulu sisebenzisa amahora angu-30-40 ngesonto kuma-Smartphone futhi le namba iyanda usuku nosuku. Lokhu kwenza kube lula kuma-casino game abadali bamageyimu ukuheha ukunakwa umdlalo omusha ngamadivayisi eselula. Ama-Smartphones namakhompyutha we-tablet yiwona amapulatifomu ayisisekelo emidlalo yokugembula. Namuhla, abathuthukisi bagxila emizamweni yabo kuphela kwizicelo zeselula kuphela.
Iphuzu elibi lembonini lihlala lihlangene nama-ejensi kahulumeni emazweni amakhulu. Lapho amanye amazwe anenani eliphezulu lentela, kanti abanye banomkhawulo ophelele webhizinisi lokugembula.
Nakuba emazweni amaningi aseYurophu imithetho ivumela imvume ye-casino e-intanethi, lokhu kwenza iYurophu ibe yisifundazwe sokubala ukugembula. Eqinisweni, i-48% yemali yonke yemali engenayo yatholwa eYurophu.
Kuneminye imikhuba eminingi embonini ye-casino e-intanethi njengokugxila okuphezulu ekuvikelekeni, ukubheja idivaysi yeselula, ukuzijabulisa imidlalo ye-casino esetshenziswa emhlabeni wekhasino. Ungahlola i-norskcasinoguide.com ukuze uthole imininingwane ehlobene nekhasino ehlobene nemidlalo yayo.
I-135 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-CrazyScratch Casino
I-105 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Joy Casino
I-20 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi eVerajohn Casino
I-25 yamahhala i-spin bonus ku-Playamo Casino
I-140 mahhala ayikho ibhonasi yokufaka imali e-Betsafe Casino
I-140 yamahhala i-spin bonus ku-Anna Casino
I-155 mahhala ayikho ibhonasi yokufaka idiphozi e-Caribic Casino
I-70 yamahhala i-casino e-Dragonara Casino
I-100 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-Hello Casino
I-130 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi eCashmio Casino
I-15 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Triobet Casino
I-85 yamahhala e-Estrella Casino
I-125 yamahhala i-casino e-LuckyDino Casino
I-55 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Landing Page Casino
I-60 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi eBetChan Casino
I-165 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti eCherry Casino
I-95 yamahhala i-spin bonus ku-Suomikasino Casino
I-170 yamahhala i-spin bonus ku-Bet365 Vegas Casino
I-85 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Buzz Casino
I-145 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Noxwin Casino
I-100 yamahhala e-Hey Casino
I-135 yamahhala i-spin bonus ku-Kolikkopelit Casino
I-15 yamahhala i-casino e-Yako Casino
I-140 yamahhala e-ExtraSpel Casino